etone .. manawphyulay .. ဆူး ..wei wei တို့သို့ အိပ်ဖွင့်ပေးစာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » etone .. manawphyulay .. ဆူး ..wei wei တို့သို့ အိပ်ဖွင့်ပေးစာ
etone .. manawphyulay .. ဆူး ..wei wei တို့သို့ အိပ်ဖွင့်ပေးစာ
Posted by fatty on Dec 16, 2010 in News | 30 comments
လူပျိုကြီး ( ကိုထူးညို )
မင်းကပြုံးလည်း ငါရုန်းထွက်မယ် ……
မင်းကမုန်းလည်း ငါကပြုံးမယ် ……။
” တော်ရာမှာနေမှ လော်မာရာမကျ” တဲ့ ……
ကျေးဇူးပြုရ်ျ ၀ိုင်းတော့မဗျင်းကြနဲ့နော် …ကဗျာခေါင်းစဉ်က လူပျိုကြီး …တဲ့
ကိုပေါက်ပြောတဲ့ comment က တစ်သက်လုံး ရုန်းတော့ဗျို့ ဆိုတာကို အကြိုက်ဆုံးပဲဗျာ…
ဒီဆိုဒ်ကပျင်းစရာကြီးဆိုလို့ .. ကျနော်အဖိုးကြီး သက်သက်ရွ .. အဲ ဆွပေးလိုက်တာပါ …..
ကျန်တဲ့ သက်ဆိုင်သူတွေမမန်းသေးပါလား … မမန်းရင်ထပ်လာမှာနော် .။
ဦးဖက် သည် ခေသူမဟုတ်ချေတကား
““ ယောက်ျားကောင်း မောင်းမတစ်ထောင် ”” ထုံး ကို နှလုံးမူရွေ့ 
ရဲ ရဲ ဝံ့ ဝံ့ လက်ခမောင်း ခတ်ခဲ့သည်ပါတကား
ဒီကဗျာအရာဖတ်ကြည့်တော့ စိတ်ပုတီးနဲ့ ရိပ်ကြီး ခိုသင့်ပြီ ထင်တယ်။
အပျိုကြီး ဘ၀ဆိုတာ လိုပြီး မရဆိုတဲ့ အသုံး လူတွေ လွယ်လွယ် သုံးနေကြတယ်။
သိသလောက်ကတော့ ချစ်ရတဲ့ သူ လက်တွဲဖော် ရှိနေပြီ ဆိုတာ သေချာတဲ့ လူ ၃ယောက်တော့ ရှိတယ်။ တယောက်ကတော့ မစပ်စုမိဘူး။ အချိန်အခါ နေ့ကောင်းရက်သာ မကျသေးလို့သော်လည်းကောင်း ကံအကျိုးပေး မတိုက်ဆိုင်သေးလို့သော် လည်းကောင်း အကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့် အပျိုကြီး စာရင်းပါသွားတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အီးတုံးကတော့ အပျိုကြီး စာရင်း မသွင်းသင့်သေးပါဘူး။ အီးတုံး အသက်က ငယ်ပါသေးတယ်။ သူမှာ လည်း ချစ်သူ ရှိပါတယ်။ မနောလည်း ငယ်ပါသေးတယ်။
ဒီပိုစ်ကို တင်တာ အိတ်ဖွင့်ပေးစာတဲက အမျိုးသမီးတွေ ချစ်သူ အတည်တကျ ရှိမရှိ သိချင်ဟန်တူ၏။
ဆူး ကတော့ နှစ်ရှည်လများ ချစ်ပြီး လက်ထပ်ဖို့ အထိရည်ရွယ်ထားပြီး ပန်းတိုင်တခု ကိုစောင့်နေသူ နှစ်ဦးစလုံး သစ္စာရှိရှိ လက်တွဲမြဲနေခဲ့ပါတယ်။
ကွန်မန်း နောက်ကျတာက အခုမှ အွန်လိုင်းဝင်လို့ပါ။ နောက်ရက်တွေ ရက်ရှည်လည်း ပျောက်သွားဖို့ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြန်လာမှာပါ။
မချော ၁၀ယောက် ကိုယ်တယောက်
သီချင်းပဲ ဆိုလိုက်တော့မယ် …
္ဒ္ဒ” ကျွန်မမှာ ချစ်သူရှိတယ် … ရှင် ငရဲကြီးလိမ့် မယ် ….”
စိတ်မလျော့နဲ့ ဦးဖက်၊ ဘဝဆိုတာ ဒီလိုပဲ။ တကြိမ်မရ နှစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြီမ်မရ သုံးကြိမ်……..
ယောက် ကျားတို.မာန် တေခါနီးလေ ဆော. လေဆို လား ပဲ ဇွဲမလျော.ကြပါ နဲ.ဗျို.
အရွယ်အို တဏှာပို ၊
ဗိုက်ကပူ ချက်ကစူ ၊
အပျိုတိုင်းကိုငေး အရွယ်ဟိုင်းတောင်မရွေးနိုင်တဲ့ ဦးဖက်ရေ/ လူပျိုကြီးရေ ….။ ကန်တော့ဆွမ်းပါ )
(ကဗျာထဲက လူပျိုကြီး ဦးဖက်ကိုပြောတာပါ …မန္တလေးဂေဇက်က ကလေးတို့ရဲ့ ဒယ်ဒီ ကိုဖက်တီးမဟုတ်ပါ )
မြန်လိုက်တဲ့ comment တစ်ခါထဲ တက်သွားတယ် .. ရေးတာတောင်မပြီးသေးဘူ enter ခေါက်မိလို့… ။
ချိန်ပါ (ချိန်လိုက်တိုင်းပါပါသွားလို့ ) အဖန်တစ်ရာပဲရှိသေးတယ်နော်.. တစ်ရာ့တစ်ကြိမ်မြောက်ချစ်ခွင့်ပန်ခြင်းဆိုရင် … ကိုရီးယားမင်းသမီးလေးတောင် ကြွေချင်ကြွေလာမှာ … ကြိုးစားကြိုးစား
မီးတို့ဆီမှာ အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်ကို ကိုချိန်ပါကြီးလို့ ခေါ်တာရှိတယ်… ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူချိန်လိုက်တဲ့ ကောင်မလေးတိုင်းက ယောက်ျားနောက် လိုက်သွားလို့ :P…. ဦးဖက်တီးကလဲ အဲလို ချိန်ပါကြီးပဲလား….:P
ကိုဖက်ရဲ့ စာလုံးပေါင်းမှာ အိပ်ဖွင့်လို့ ရေးထားတယ် .. အိပ်နေတုန်း ဘာဖွင့်တာလဲ .. အိတ်ဖွင့်မှ စာအိတ် ဖွင့်ထားတာလို့ ဆိုတာလေ ..
ရှုးရှုးပေါက်ရင် အဝေးကြီးရောက်တယ်” နဲတဲ့စွမ်းရည်လားဗျာ
အဲဒီတော့ ပိုင်ရှင်မရှိတဲ့ မမတို့ ဒေါ်ဒေါ်တို့က
ချာတူးရေ ဦးကြောင်ပေါက်ရင် လမ်းဟိုဖက်ခြမ်းတော့ အသာလေးပဲ။ ရူးရှုးဆိုပြီး လမ်းဟိုဖက်က ခွေးကို ခဲလုံးနဲ့လှမ်း ပေါက်တာကို ပြောတာနော်။
လာမဲ့နှစ်သစ်မှာ .. အားလုံး ပျော်ရွှင်ရယ်မောနိုင်ကြပါစေ ….။
လာမဲ့ခရစ်စ်မတ်စ်မှာ ..အားလုံး $$$$$$$$$ ရနိုင်ကြပါစေ ….။
ကိုဖက်တီးရေ $$$$$$$$$$$ က ဈေးတွေကျတာ ဇောက်ထိုးချည်းပဲ ပြန်တက်ခြေ မမြင်ဘူး ။ 600 လောက်ထိ ကျမယ်ဆို ဟုတ်လား ။
ချစ်သူ ရှိကြောင်း ထုတ်ကြွား လိုက်လေ သတည်းပေါ့။
အင်း ……. ဦးဖက်က “တော်ရာမှာနေမှ လော်မာရာမကျ” တဲ့ ……
အင်း ……. ကိုယ်လည်း လူပျိုကြီးမှန်းမသိအောင် ဘာမှ ၀င်မပြောပဲ တိတ်တ်ိတ်လေးနေမှနဲ့ တူတယ်။
http://www.sagarwarmyae.org/?p=17951 ဦးဖက်ရေ ပေးထားတဲ့လင့်ခ်ကို ဝင်လို့ရလား။ ဗိုလ်တာရာ ရဲဘော်သုံးချိပ်ဝင်ရေးထားတဲ့ ပထမံဦးအောင် အကြောင်းပါ။ သိဒ္ဓိမဟဒ္ဓိဆိုင်ရာနဲ့ ပတ်သက်တာတွေပါပါတယ် ဦးဖက်လို ယုံကြည်းကိုးကွယ်သူတဦးရဲ အမြင်နဲ့ ထပ်မံဖြည့်စွက်ချက်များကို သိလိုပါသည်။ ကျန်သူများဝေဖန်လျင်လည်း အပြုသဘောနဲ့သာ မှတ်ချက်ပြုစေလိုပါသည်။
အဲဒီစာအုပ်ကို ငယ်ငယ်တုန်းက ဖတ်ဖူးတယ် … ၀လုံးလေးတွေ နှစ်ဆတိုးသွားတာကို အရမ်းသဘောကျတယ် …
သူငယ်ချင်း ၃ ယောက် အကြောင်းကို အခြေခံရေးထားတာဆိုတော့ ၀တ္ထုဖတ်ရသလို ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ် … အဲဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီးနောက်ပိုင်း ဘိုးဘိုးအောင်ကို အထင်ကြီးလေးစားမိပါတယ် … ဘာသာရေးနဲ့ လွဲတာတော့ လွဲတာပေါ့ … လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ လောက်က ဖတ်ဖူးတာဆိုတော့ မေ့တေ့တေ့ပဲ …
ရည်ရွယ်သူနဲ့ ရွှေလက်တွဲ မင်္ဂလာပွဲမနွဲသေးသမျှ
ရှိရှိသမျှယောက်ျားသား ကိုယ်က သူကို့ ချစ်များချစ်နေရင်
ပိုင်ဆိုင်ဘို့ အခွင့်အရေး ကျန်နေပါသေးသတဲ့။
သူတို့ ရည်ရွယ်တယ်ဆိုတာ စိတ်ကူးဘဲရှိသေးတာ
အဲ မပြေလိုကတော့ အချုပ်ထဲပေါ့ ……………………………………………
မိဘ အရွယ် အိုကြီး အိုမ တွေ မြက်နုတွေ စားဖို့ ကျန်နေကြလား မသိဘူး။
သက်တူ ရွယ်တူ စိတ်တူတွေ ဆိုရင်တော့ မပြောတတ်ဘူး။
အမျိုးကောင်း သမီးတွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမဲ့ဟာ.. သရေကျအောင် လမ်းညွန်သူက ညွန်နေတယ် ခက်တော့ ခက်တယ်။ ကိုယ်က မွေးတော့ ကိုယ့်သမီးတော့.. ကိုယ်မွေးတာ မဟုတ်တော့ သူများ သားသမီးပေါ့။
မင်းကမုန်းလည်း ငါကပြုံးမယ် ……။ ဒီစာသားလေးကိုအရမ်းကြိုက်တယ်